Paramende Youdzwa Kuti ZBC Yakakudikana Kupa Mapato Ose Mukana Musarudzo dzemaBy-Elections
Vachitaura pamusangano wekuzeya kufambiswa kwakaitwa mashoko pamaby-election uyo wapindwa nenhengo dzekomiti yeparamende inoona nezvekuburitswa kwemashoko, Zimbabwe Electoral Commission, neZimbabwe Media, mukuru weZimbabwe Broadcasting Corporation (ZBC), Muzvare Adeleide Chikunguru, vanoti kambani yavo yakaedza kupa mukana wakaenzana kumapato ese aikwikwidza musarudzo dzemaby-elections dzichangobva kuitwa.
Asi vati ZBC yakatadza kuita izvi nekuti vatori venhau vayo vairambidzwa kupinda mune mimwe misangano yemapato anopikisa.
Muzvare Chikunguru vati havazive kuti sei ZBC yairambidzwa kupinda mumisangano yemapato anopikisa.
Vatiwo kunze kwevakasanobata chinzvimbo chemunyori webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, VaCharlton Hwende avo vaikwikwidza kuKuwadzana East, dzimwe nhengo dzese dzaimirira CCC dzakaramba kupinda muzvirongwa zvekutaura pamusoro pesarudzo idzi pamarhedhiyo neteverevhizheni eZBC.
Muzvare Chikunguru vabvuma kuti misangano yakawanda yavakaburitsa paterevhizheni yaive yemutungamiriri weZanu PF VaEmmerson Mnangagwa asi vakati vakaburitsawo misangano yaVaNelson Chamisa veCCC yavakaita kuMbizo, Masvingo neHighfield muHarare.
Vatiwo vakaburitsa misangano mIviriri yaVaDouglas Mwonzora veMDC-T yakaitwa muHighfield muHarare vachiti Zanu PF, CCC neMDC-T ndomapato ega akaita misangano mihombe kana kuti maStar Rally paitaura vatungamiriri vawo.
VaSettlement Chikwinya, vaimirira CCC kuMbizo, avo vapinda mumusangano wanhasi vabvuma kuti vakaramba kuenda pazvirongwa zveZBC nekuti ZBC ine divi rayakarerekera uye inogarobudisa bato ravo zvisina kunaka.
Mutauriri weMDC- T VaWitness Dube vaudza Studio 7 bato ravo harina kumborambidza ZBC kupinda mumisangaNo yaro uyewo vakati dzimwe nguva nhengo dzebato ravo dzaikokwa kuzvirongwa zveZBC nguva yapera zvekuti dzaizotadza kuenda.
Asi imwe nhengo yekomiti iyi uye varinhengo yeZanu PF vachimirira Rushinga muNational Assembly, vati nhengo dzeCCC nemamwe mapato anopikisa vaifanira kupinda muzvirongwa zveZBC voona kuti zvinofamba sei kwete kungochema vasina kupinda muzvirongwa.
Nhengo yeZEC yange iri pamusangano uyu vari sachigaro wekomiti yeZEC inoona nezvemashandiro anoita vatapi venhau panguva yeesarudzo, Amai Leticia Kazembe, vabvuma kuti ZBC yainge isiri kupa mapato ese mukana vakati vakatoburitsa gwaro kuvatori venhau vachitaura nezvenyaya.
Asi vatiwo ZBC haina zvayaikwanisa kuita kana vatori venhau vayo vairambidzwa kupinda mumisangano nemamwe mapato.
Asi VaChikwinya vati kunze kwezvataurwa naMuzvare Chikunguru nyaya yekuti ZBC inoita basa yakarerekera divi rimwe iri pachena uye yakakataurwa nezvayo nemasangano ese akaongorora sarudzo dza2018 uye sarudzo dzemaby-election dzakaratidza kuti ZBC haisati yachinja maitiro ayo.
Vati nyaya inofanira kugadziriswa sarudzo dza2023 dzisati dzasvika.
Sachigaro wekomiti yezvekuburitswa kwemashoko, Amai Sipho Mokone, vati nyaya yekuti ZBC inorambidzwa kupinda mune mimwe misangano inoratidza kuti haisi kuita zvinotarisirwa neveruuzhinji uye ndosaka vachiti mitemo yekuburitswa kwemashoko inofanira kuvandudzwa kuti mapato ese awane mukana yakaenzana paZBC pamwe nekuti ZEC neZMC vaone kuti izvi zvaitwa.
ZBC inosungirwa nemutemo, zvikuru sei chikamu 160 (g) cheElectoral Act kuti ipe mukama wakaenzana wekushambadza zvirongwa nemashoko emapato ese anenge achikwikwidza musarudzo pachena.